Dharkeenleey - Gpedia, Your Encyclopedia
Ceel dheere,Showriyaha, Dabaqeen, Aabagedo, Kuweyt, Suuq boocle,Quraca waanjeesha, Suuq liif, Xoosh, Buula qaran, Kaxda, Macmacaanka, Suuq yaraha, salaama, Tawakal, tabakaayo madow, nuur aduunyo.
Degmada Dharkeenleey waxay ka mid tahay degmooyinka magaalada Muqdisho waxay xigtaa dhanka koofur galbeed. Waxaa waayadii dagaalada iyo qaxa xamar ka socdeen ee itoobiyaanka joogeen ku noolaa oo Ku soo qaxay soon a dagay degmada dad fara badan oo ka soo qaxay Magaalada inteeda kale. Degmadu waxay ka kooban tahay xaafado badan oo
ay ka mid yihiin xaafadaha Ceel dheere,Showriyaha, Dabaqeen, Aabagedo, Kuweyt, Suuq boocle,Quraca waanjeesha, Suuq liif, Xoosh, Buula qaran, Macmacaanka, iyo kuwo kale oo aan yareyn. Degmada Waxay soo martay marxalado kala duwan waxaana lagu tilmaamaa meelaha istaraatiijiga Xamar ka mid ah. Waxaa ku yiilla suuqyo sida; (Suuq liif, Suuq boocle), Iskuulaadkeeda waxaa ka mid ah;(Al-Fariid, Abuubakar Al-sadiiq "Dabaqeyn", Iqra',Khaddiijo, Alanwaar, Assafa,somali pen ...). Ardaydeeda waxay ka mid yihiin arday ugu dadaalka badan Xamar, iskuuladuna sida kan Iqra' waxa uu galay laba mar oo isku xigta kaalinta 1aad ee Bankul Islaami. Waxaa noqday waxyaabaha lagu faano ayadoo degamada ay ka mid tahay degmooyinka ugu fiican dhanka wax barashada, dhaqaalaha, dhismooyinka iyo wax yaabo kale. Tan iyo burburkii waxay ka sii hormaraysay degmooyin kale oo ku yaalla Caasimadda. Madiina waa degmada la tilmaamo in ay ahayd meesha ay ka timid degmadan(madiina=dharkeenleey+wadajir), waxaan xuduudeeda lagu tilmaamaa in ay tahay wadada xaaji maxamed ee Suuq yare. Waagii burburka waxaa maaamuli jiray hogaamiyo kooxeedyo kala duwan sida: Muuse Suudi, Xuseen Caydiid waxaana ka dhici jiray mar mar dagaalo aan sidaa u cusleyn. waayadii danbe waxaa xukunkeeda soo maray; Maxkamadaha Islaamiga, Jabhadda Islaamiga. Haddana waxay degmada hoos tagtaa maamulka Gobolka Banaadir ee Soomaalia waxa ka jira kooxo badan oo kubada cagta sida> kooxaha( IFTIN> AARGO> USSY> VIOLA> AL RAASHID> SUUQ YARE> AL IIMAAN> ZEENO> AL-AHLI DHARKEENLEY> JUGWAYN> AL-TUNSA> IFIS> FC GODEEY> HARIIDKA> XOOSH FC INTER BOYS R.R.P.B.O>
degmada waxay ku guuleysatay koobki degmooyinga ee ugu dambeeyay sandkii 2011
waxaa kale oo ay ku guuleysatay tartan aqooneed kii ramadaanka ee 2013 oo ay ku tar tamayeen in kabadan 28 degmo oo ka kala yimid gobalada dalka oo dhan & ku caasimada.
suuqyada degmada> suuq boocle ,suuq yare,suuq ceel dheere ,suuq liif. iskoolada>Al anwaar EX:DHAME YAASIIN CARTAN,ISKOOL BAARBE,IKOOL KUWAYD,khadiIJA iskuul dharkenley al muniir,Abuubaka Al sidiiq(iskuul Dabaqeyn)& iskuulo kale oo badan xaafadaha> MACMACAANKA,TABAKAAYO MADOOW ,KAAWO GODEEY CALI CUMAR,ABA GEDO,SUUQ YARE XOOSH, SALDHIGA GALBEED, DABAQAYN . masaajiyada: uun laaye, cusmaan bin cafaan, masjidka kuweyt, masjidka saldhiga galbeed, dabaqeyn, xaaji maxamed, sh cabdixafiid, rabi sali al-nuur, al- raxma ceeldheere, salaam, macalin nuur,Khaliilu Raxman,
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dharkeenleey&oldid=201678"